केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय
समाचार र सुचना
उद्देश्य तथा रणनीति
कुखुरापालन व्यवसायका चुनौतीहरु
पशु विकास क्षेत्रको एतिहासिक पृष्ठभुमी
कुखुरापालन क्षेत्रको ऐतिहासिक विकासक्रम
क्रियाकलाप तथा घटना
परम्परागतरुपमा रुपमा स्थानिय जातका कुखुरा पालन व्यवस्थापन गर्दै आएका । २०१४ ब्लाक मिनोर्का , रोड आइल्याण्ड रेड र ह्वाईट लेगहर्न जातका कुखुरा आयत गरेको ।
परवानीपुर, बारामा अमेरिकी सहयोगबाट सेन्ट्रल ह्याचरी स्थापना भई १७०० गोटा न्यू–हेम्पशायर जातका चल्लाहरु आयात गरी चल्ला उत्पादन गरेको र चल्लामा भाले, पोथी छुट्टयाउने प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादित चल्ला काठमाण्डौ उपत्यकामा विक्री वितरणको लागि पठाउने गरेको ।
तत्कालिन स्व. श्री ५ महेन्द्र बीर वीक्रम शाहदेवबाट सेन्ट्रल ह्याचरीको समुदघाटन ।
जाउलाखेल, ललितपुरमा ब्रुडर फार्म स्थापना गरी परवानीपुरबाट अण्डा ल्याई चल्ला उत्पादन गर्न थालेको ।
रत्न फिड ईण्डस्ट्री (तत्कालिन फिड सप्लाई हाउस) ले निजि क्षेत्रबाट सर्वप्रथम भारतबाट उन्नत जातका चल्लाहरु आयात गरेको । सोहीबेलामा रत्न फिड, कान्तिपुर पोल्ट्रीफार्म र जोशी पोल्ट्री फार्मले ब्रोईलर र लेयर्स चल्लाहरु विदेशबाट आयात गरी वितरण गरेको ।
त्रिपुरेश्वरमा पशु चिकित्सा अनुसन्धान शाखा (हाल केन्द्रिय जैविक उत्पादन प्रयोगशाला) को २०२० सालमा स्थापना भई रानीखेत र फाउलपक्स रोग विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन शुरुभई वि.सं. २०४५÷४६ सम्म निःशुल्क वितरण गरेको ।
हेटौंडामा क्याटलफिड प्लान्ट स्थापना भई कुखुराको दाना उत्पादन गरेको ।
जावलाखेलस्थित ब्रुडरफार्म खुमलटारमा स्थानान्तरण भई चल्ला उत्पादन कार्य सुचारु रुपले संचालन भएको ।
यो अबधिमा तरहरा, पोखरा र नेपालगंजमा ह्याचरीहरुको स्थापना भएको ।
ग्रामीण कुखुरा विकास कार्यक्रमको थालनी गरेको ।
पशु सेवा विभागले सरोकारवालाहरुसँगको सहमतिमा गम्बारो रोग विरुद्ध भ्याक्सिनेशन र जैविक सुरक्षा रणनीति अपनाएको ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र त्यस अन्तर्गत बंगुर तथा कुखुरा अनुसन्धान कार्यक्रम र पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भई कुखुरा सम्बन्धि अनुसन्धानमा जोड दिइएको । भारतबाट गिरीराज जातका कुखुरा आयात गरेको ।
चितवनमा पोल्ट्री एक्स्पो सम्पन्न भएको ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ लागू भएकोले कुखुरापालन व्यवसायलाई बढि व्यवस्थित गर्न सघाउ पुगेको । पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ र नियमावली २०५७ को कार्यान्वयनबाट स्वच्छ मासु उत्पादन तथा विक्री वितरण व्यवस्थित भई जनस्वास्थ्यमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको ।
केन्द्रिय जैविक उत्पादन प्रयोगशालाबाट क्एँ ९क्उभअषष्अ एबतजयनभल ँचभभ० फुल आयात गरी रानीखेत, फाउलपक्स, गम्बारो रोग विरुद्धका खोपहरु उत्पादन शुरुआत भएको ।
कुखुराको बजार विकास तथा प्रबद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने उद्धेश्यले पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालयको स्थापना भएको । यसले कुखुराको बजार विकास तथा प्रबद्र्धनमा थप सहयोग भई रहेको ।
सुदुरपश्चिमाञ्चलका ९ जिल्लाहरुमा गरीवि निवारण व्यवसायोन्मुख कुखुरापालन कार्यक्रम संचालन गरेको ।
पेरेन्ट स्टक र लेयर्समा फैलिएको मरेक्स रोगको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, पशु सेवा विभाग र निजी क्षेत्र समेतको सकृयतामा नयाँ खोपको नीति बनाई सो रोग नियन्त्रण गर्न सफल भएको ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले भारतबाट जापानिज बट्टाई ९त्तगबष्०ि र टर्की जातका पन्छी आयात गरेको ।
लिची हर्ट रोगको प्रकोप नियन्त्रण गरेको ।
एभियन ईन्फ्लुएन्जा संक्रमित मुलुकहरुबाट पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिवन्ध लगाईएको । सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको ।
विभागीय निर्णयबाट “पोल्ट्री ब्रिडिङ फार्म र ह्याचरीको मापदण्ड” स्वीकृत भएको ।
विभागीय निर्णयबाट “लेयर्सको व्यवस्थापन व्यवहारिक संहिता” स्वीकृत भएको ।
नेपालको पूर्वी नाका झापा जिल्लामा एभियन ईन्फ्लुएन्जा रोग फैलिएको र सो रोगको नियन्त्रण भई सकेको
सहकारी खेती अन्तर्गत पशु पालन कार्यक्रम ५४ जिल्लामा लागू भएको ।
बंगुर औधोगीक पार्क स्थापने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन
युवा लक्षीत बंगुर पालन कार्यक्रम संचालन हुने जिल्लाहरु
बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रमको बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम
पशु बिकास सेवा कार्यक्रम (पिग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम) (राष्ट्रिय अभियान)
अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामीण कुखुरा प्रबर्द्धन कार्यक्रम
पिग एण्ड पोर्क (बंगुर व्यवसाय) सुधार कार्यक्रम: राष्ट्रिय अभियान सञ्‍चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
Invitation of Bids for supply & Delivery of Pig Lean Meater (Black Fat Instrument) and Preganacy Diagnosis Device for Pigs
पिग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम: राष्ट्रीय अभियानको कार्यविधि २०७२
वङगुर कार्यविधि २०७४
बंगुर व्यवसाय औद्योगिक पार्क स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधी – २०७३
विनियोजित रकम सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन
अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन
अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन �
बंगुर व्यवशाय सुधार कार्यक्रम : राष्ट्रिय अभियान (पिग एण्ड पोर्क मिसन) सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पशु बिकाश सेवा कार्यक्रम (पिग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम)
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पशु बिकाश सेवा कार्यक्रम (गाई, भैंसि, बाख्रा तथा अन्य)
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, सहकारी खेती, साना सिंचाई र मल विउ ढुवानी कार्यक्रम (बंगुर/कुखुरा)
Combine Pig Shed Design
Directorate of Livestock Training
सर्बाधिकार © 2018. केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय